SBO – Qabsoo Oromoo Harargee – Guraandhala 20, 2020 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSBO – Qabsoo Oromoo Harargee – Guraandhala 20, 2020
[SBO – Gurraandhala 20,2020] Jilli hoggana ABO kan waajjira dhaabichaa banuuf gara Lixa Shaggaritti bobba’e humna nageenyaa mootummaan dhorkame.
Godina Shawaa Lixaatti waajjira ABO Ona Ada’aa Bargaa banuudhaaf jilli ABO Jaal Abdii Raggaasaan durfamu gara magaalaa Mogoritti utuu imaluu seensa magaalaa Incinnii irratti humnoota nageenyaan dhorkamanii of irra deebi’uuf dirqamaniiru.
Kana malees tuutni miidiyaa ONN kan gaazexeessaa Firaa’ol Jaallataa fi ogeessi kaameraa Geetuu Alamayyoo kan gara sanatti bobba’an humna nageenyaa kanaan dhorkamaniiru.
Yeroo darbes magaalaa Baakkootti sagantaa ABOn qopheesse irratti ogeessi kaameraa Geetuu Alamayyoo humna waraana mootummaan reebichi ulfaataan irratti raawwatamuun kan yaadatamuu dha.
Humni poolisii idilee, kora bittinneessaa fi humna addaa jedhamuun beekamu “akka darbuu hin dandeenye ajaji nutti kenname” jechuudhaan ittisan.
Akka magaalaa Mogor irraa odeeffannoo bilbilaan argannetti humni waraana mootummaa meeshaalee sirna baniinsaa kanaaf ummanni qopheeffate saamuudhaan konkolaataatti fe’atanii akka deeman nuuf himaniiiru.
Namoota sagantaa kana irratti hirmaachuuf ba’anis reebicha irratti raawwachuun miidhaa qaqqabsiisaa akka turan beekameera.
Magaalaa Mogorii fi guutummaa Ona Ada’aa Bargaa keessatti miseensonni ABO heddumminaan mana hidhaatti guuramaa akka jiranis beekameera.
Yaa Abdiisha keenya; jarrii bilxiiginnaa tuni Horii fi gaala mallaaqa isaanitin bitaachatuma footoo itti ka’aatuma; kan dirree bahe mormee tumuu fi dorsiisuu itti fufani jiran. Amma humna qawweetiinis dorsiisani sagaale argaachuu barbaadu. Wannii filaannoo tuni dhugaan wan jirtu nattiin fakkaattu. Abbootin araddaatis kan isaanif ajaajamu male hunda haraani;kan duri deeffacha jiru. Deggarsii ummanni bahaafi hin jiru;kameera cinaatti kaasani hedduu fakkeeysun ittii fayyadamuu fi dhimmaa biraatis hawaasa yaamani deggarsa isaani fakkeysani hojjaacha jiru. Nuti keessa wan jiruuf dhugaa jiru argaa jirra. Dubbaatuf hidhaatu nuduuba jira. Bakkaa ittii milkaahan qofa viidiyoo agarsiisan male footumaan nama sobaa jiru. Vidiiyuma sanaahu gubbaarra gadi hin agaarsiisan. Namni isaan deggaru xiqqaa wan ta’eef.
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 10, 2020 SBO EBLA 10 2020